NYC Exchange Genesis anogamuchira BitLicense
Genesis Global Trading akawana BitLicense kubva New York State wacho Department of Financial Services (DFS), zvichiita chete wechishanu zvakasimba kwemakore matatu kugamuchira gakava rezinesi.
Exchange caters yakakwirira mambure mutengo uye masangano vanoita uye anopa 24/7 wokuita zvemusika Bitcoin, Litecoin nevamwe.
Mheni samambure rinokura zvakawanda akasimba
The Mheni Network riri kukura. Kuwanda nodes yave ichiwedzera mumakore mitatu, sezvo izvi girafu inoratidza iyo rinofananidza February 2018 kuna May 2018.
muenzaniso uyu anoratidza uwandu nodes izvo vaigona zvakanangwa kana kudzimika uye nemishonga LN kuna ichi, achiratidza % pamusoro pomumbure kuti kuchine woshanda, inoratidza kuwedzera decentralization pamusoro LN.
The nekubvirana ndiko Mheni zvakarukwa yakawedzera uye nani kubva February kusvikira May.
Sberbank anopedza Russia wokutanga chisungo mutengapwe kushandisa blockchain
Russian mubhengi Sberbank uye Telecoms MTS yakasimba kunge ichiitwa zvavanotaura ndiko nyika yokutanga vezvokutengeserana chisungo kutengeserana akaita kushandisa blockchain.
MTS vakazivisa Chipiri kuti akanga akaisa zvokutengeserana zvisungo 750 miriyoni rubles ($12.11 miriyoni), pamwe chikuru mutengi kuva Sberbank, kushandisa proprietary blockchain pakakwirira inopiwa kuNational Settlement panodonedzerwa.
Andrey Kamensky, VP rezvemari, upfumi uye M&A pana MTS, akataura kuti akabudirira blockchain kutengeserana kwaiitwa nokupira “yose ugari cheni, kubva chibatiso placement uye mari kutambira kuti kuzadzika zvose mitoro kusvika investor.”
Next Post:Sei munhu kufanotaura maitiro mwero mumwe cryptocurrency tichitarisa uwandu mirairo akaisa?
Chivabvu 22, 2018 pa 1:50 AM
Madlyn Gallant anoti:
Chivabvu 24, 2018 pa 9:43 PM
Chikumi 17, 2018 pa 6:16 PM